Fitakiana Fanesorana Ny Filohan’ny Antenimiera Ao New Zealand Noho Ny Resaka Sotasota Ara-nofo Manàla Baràka · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 13 Novambra 2015 16:36 GMT
Niteraka tabataba be ny nataon'ilay filohan'ny Antenimieram-pirenena ao New Zealand, David Carter, taorian'ny nandroahany ireo vehivavy marobe mpikambana ao amin'ny Parlemanta izay niezaka namaky bantsilana fa hoe niharan'ny sotasota ara-nofo izy ireo.
Ilay fifandirana dia narahan'ny famelezan'ny Praiminisitra John Key ireo mpikambana avy amin'ny mpanohitra ho “ao an-damosin'ireo mpanolana”, tamin'ilay fitazonana olompirenena niteraka resabe tao New Zealand any Aostralia. Niandry ny valin'ny fampakàrana didy momba ny fandroahana azy ireo ry zareo ireo, izay mihatra amin'ireo efa nanana raharaha fidirana am-ponja maherin'ny taona iray.
Fahatsapàna iray ifampizaràn'ny betsaka no nasehon'i Paul Williams tao amin'ny Twitter eo ambanin'ny tenifototra #SacktheSpeaker :
Zavatra tsy tokony hatao tsinontsinona ny fanolànana. Vehivavy #1amin-ny4 ry @JohnKeyPM Toa mila mamerina mitadidy ianao
Fironana LOHALAHARANA ao New Zealand i David Carter ankehitriny. Tsidiho ny https://t.co/MSDhFJQIZV hijerena ireo lahatsary sangany any amin'ny faritra misy anareo